Google Workspace နှင့် Two-Factor Authentication နှင့်အတူ WordPress တွင် SMTP ဖြင့်အီးမေးလ်ပို့ပါ။ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 26, 2021 ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 12, 2021 Douglas Karr
ငါကြီးမားတဲ့ထောက်ခံအားပေးသူပေါ့ two-factor authentication (၀၁FAငါပြေးသောငါတိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ။ ဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်အချက်အလက်နှင့်အလုပ်လုပ်သောစျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်အလွန်အမင်းဂရုမစိုက်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် site တစ်ခုစီအတွက်မတူညီသောစကားဝှက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ Apple Keychain ကိုစကားဝှက်သို့သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတိုင်းတွင် 2FA ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
သင်ပြေးနေတယ်ဆိုရင် WordPress သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အနေဖြင့်စနစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏အိမ်ရှင်မှတစ်ဆင့်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ (စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်သတိပေးချက်များစသည်တို့) ကိုတွန်းရန်ပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်အကြောင်းပြချက်နှစ်ရပ်အတွက်ဤသည်အကြံပြုလိုသောအဖြေမဟုတ်ပါ။
သင်၏ဆာဗာမှလာသည့်အီးမေးလ်သည် SPF သို့မဟုတ် DKIM ကဲ့သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းဖြင့်အတည်ပြုပြီးအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ ဆိုလိုသည်မှာထိုအီးမေးလ်များကို junk folder သို့တိုက်ရိုက်ပို့နိုင်သည်။
သင်၏ဆာဗာမှတွန်းထုတ်ပေးသည့်အပြင်ထွက်အီးမေးလ်များအားလုံးကိုသင့်တွင်မှတ်တမ်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ Google Workspace (ဂျီမေးလ်) အကောင့်မှတစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်သင်၏ပို့ထားသောဖိုလ်ဒါတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ဆိုဒ်ကမည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့နေသည်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဖြေရှင်းနည်းမှာ၊ သင်၏ဆာဗာမှတွန်းထုတ်လိုက်မည့်အစားသင်၏အီးမေးလ်ကိုသင်၏ Google Workspace အကောင့်မှပေးပို့သည့် SMTP plugin တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းအစား Microsoft ကိုတည်ထောင်လိုပါသလား။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲမှာ အကောင်းဆုံး WordPress ကို plugins ကိုကျနော်တို့စာရင်းပြုစု လွယ်ကူသော WP SMTP သင်၏ WordPress ဆိုဒ်အား SMTP ဆာဗာသို့ဆက်သွယ်ပြီးအထွက်အီးမေးလ်များကိုစစ်မှန်ကြောင်းပြသနိုင်ရန်အတွက် plugin ကိုအဖြေရှာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်ရိုးရှင်းပြီးအီးမေးလ်တစ်ခုပို့ရန်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာရွက်စာတမ်းပင်ပါ ၀ င်သည်။
အတွက် setting Google Workspace တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်
SSL အတွက် port: 465
ဒီမှာကြည့်ပါ။ (ကျွန်ုပ်သည်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်အတွက်အကွက်များကိုမပြပါ။ )
ယခုပြproblemနာသည် authentication ဖြစ်သည်။ သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်တွင် 2FA ဖွင့်ထားပါကပလပ်အင်အတွင်း၌သင်၏သုံးစွဲသူအမည် (အီးမေးလ်လိပ်စာ) နှင့်စကားဝှက်ကိုသာထည့်။ မရပါ။ ဂူးဂဲလ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပြီးသတ်အတည်ပြုရန်သင် 2FA လိုအပ်ကြောင်းပြောသောအခါသင်အမှားတစ်ခုတွေ့လိမ့်မည်။
သို့သော် Google အဘို့ဤ ... အဘို့အဖြေတစ်ခုရှိပါဘူး App Passwords များ.
Google Workspace အက်ပလီကေးရှင်းစကားဝှက်
Google Workspace သည်အချက်နှစ်ချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းမလိုအပ်သော application password များကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အီးမေးလ်ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်အခြားတတိယပါတီပလက်ဖောင်းများနှင့်သင်သုံးနိုင်သည့်စကားဝှက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၏ WordPress ဆိုဒ်။
Workspace အတွက် App Password ကိုထည့်ရန်
သင့်ရဲ့ရန် Login Google အကောငျ့.
ကို Select လုပ်ပါ လုံခွုံရေး.
အောက် ဂူဂဲလ်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ခြင်း, select လုပ်ပါ App Passwords များ.
ကို Select လုပ်ပါ အခြားပြီးတော့၊ သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့အမည်ကိုရေးပြီးစကားဝှက်တခုကိုထုတ်လုပ်ပါ။
ထုတ်လုပ်လိုက်သောစကားဝှက်ကို Easy WP SMTP ကိုကူးထည့်ပါ။ အီးမေးလ်တစ်ခုစမ်းပါ၊ သင်ပို့လိုက်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Tags: 2faGmail ကိုGoogle app စကားဝှက်ဂူဂဲလ်မေးလ်google Workspacegsuitesmtpsmtp plugin ကိုTwo-factor authenticationWordPresswordpress plugin ကို